Horudhac: Watford vs Liverpool… (Renieri oo rikoor wanaagsan ka heysta Reds & Mane oo hal gool ku sameyn kara labo rikoor) – Gool FM
Horudhac: Watford vs Liverpool… (Renieri oo rikoor wanaagsan ka heysta Reds & Mane oo hal gool ku sameyn kara labo rikoor)
(Liverpool) 16 Okt 2021. Kulanka ugu horreeya horyaalka Premier League toddobaadkan ayaa waxaa maanta isku arki doona kooxda Liverpool oo booqaneysa dhiggeeda Watford.
Macallin Claudio Renieri ayaa hoggaamin doona Watford kulankiisii ugu horreeyay kaddib markii uu toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada macallinnimo ee kooxda ku ciyaarta Vicarage Road kala wareegay Xisco Munoz oo la ceyriyay horraantii bishan.
Watford weeraryahankeeda Joshua King ayaa la filayaa inuu si buuxdo uga soo kabsado dhaawac yar oo uu jilibka ka qabay isagoo soo laaban kara kulanka ugu horreeya ee Macallin Rinieri.
Francisco Sierralta iyo Christian Kabasele ayaa dhaawacyo muruqa bowdada ah ku seegaya ciyaartan kaddib markii ay dhibaato kasoo gaartay halkaas kulankii toddobaadkii hore ee ay guuldarrada kala kulmeen Leeds United.
Dhinaca kale, Liverpool ayaa weyneysa xiddigaha reer Brazil ee Alisson Becker iyo Fabinho kuwaasoo si toos ah ugu duulay Madrid halkaas oo ay Karaantiil ku geli doonaan illaa ciyaarta Champions League ee ay Reds la leedahay Atletico Madrid toddobaadkan.
Da’yarka khadka dhexe ee Curtis Jones ayaa shaki la gelinayaa halka Diogo Jota iyo Trent Alexandre-Arnol ay taam u yihiin ciyaarta maanta.
Waa markii ugu horreysay ee ay labadan naadi kulmayaan tan iyo February sanadkii 2020 markaas oo ay Watford 3-0 ku dubatay Liverpool iyadoo soo af-jartay rikoor guuldarro la’aan ah oo ay kooxda Jurgen Klopp ku heysatay 44 kulan.
Reds ayaa labo guuldarro oo xiriir ah kala kulmi karta Hornets horyaalka markii ugu horreysay taariikhda.
Naadiga martida loo yahahay ee Watford ayaa sii caga-cageyneysa 17 kulan oo xiriir ah oo aysan shabaqeeda difaacanin halka aysan gool dhalin afartii jeer ee la garaacay horyaalka xilli ciyaareedkan.
Ismaila Sarr ayaa dhaliyay afar ka mid ah toddobada gool ee ay Watford ka dhalisay Premier League fasalkan waxaana uu dhaliyay saddexdii ugu dambeysay.
Macallin Claudio Rinieri oo noqday macallinkii labaad ee aan u dhalan Britain kaasoo afar naadi ka hoggaamiya Premier League kaddib Rafael Benitez ayaa Liverpool garaacay afar ka mid ah shantii jeer ee uu kula ciyaaray garoommada kooxihii uu soo maamulay.
Liverpool ayaa ah kooxda keliya ee guuldarro la’aan ah Premier League xilli ciyaareedkan iyadoo guuleysatay afar kulan saddex kalena barbarro gashay.
Reds ayaa noqon karta kooxdii ugu horreysay ee Ingiriis ah taasoo bannaanka kusoo dhalisa saddex gool ama wax ka badan toddobo ciyaar oo xiriir ah dhammaan tartammada.
Sadio Mane ayaa u baahan keliya hal gool si uu noqdo xiddigii saddexaad ee Afrikaan ah kaasoo 100 ka dhaliya Premier League kaddib Didier Drogba iyo xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Mohamed Salah halka sidoo kalena uu noqon karo xiddigii saddexaad ee 100 gool ka dhaliya Premier League iyadoo aysan rigoore ugu jirin kaddib Les Ferdinand iyo Emile Haskey.
Horudhac: Leicester City vs Manchester United... (Gool uu dhaliyo Ronaldo oo taariikh kale u sameyn kara)